Sida loo Xakameeyo Rabitaankaaga Sonkorta iyo U-Noqoshada Leptin Resistance - Rebates Fitness
Home » blog » Sida loo Xakameeyo Rabitaankaaga Sonkorta iyo Ka-hortagista Leptin Resistance
Shakhsiyaad tiro badan oo adduunka oo dhan ah ayaa leptin u adkaysta, qaar badanna xitaa ma oga. Qorshaha cuntada casriga ee caadiga ah waa cunsur muhiim ah. Cunista sokor aad u tiro badan, badar, iyo cuntooyin la warshadeeyay ayaa kiciya unugyadaada dufanka leh inay jirkaaga ku daadiyaan cudurka leptin. Sida caadiga ah u samee, oo jirku waafajiyaa isagoo adkaysanaya maqaarka 'leptin'.
Nidaamkani wuxuu si lamid ah uga shaqeeyaa sida dadku u adkaynayaan insulinta. Waxay kaa dhigaysaa inaad dareento jirro, daal, iyo gaajo waqtiga oo dhan - xitaa marka aad wax cunayso wax ka badan inta jidhkaagu u baahan yahay. Haddii aad marwalbo hayso cunto cunno oo aad had iyo jeer isha ku hayso cunno fudud oo kugu kallifaysa illaa ay ka gaareyso waqtiga cuntada, markaa waxaa suurta gal ah inaad leptin u adkaysato.
Cunto xumeyn la'aanta (gaar ahaan rabitaanka cuntada aan caafimaadka laheyn) ayaa kujirta astaamaha caabbinta leptin. Waxaan kugula talineynaa inaad iskudaydo inaad cuntadaada meel dhigto si ay ugu yaraan afar saacadood u dhexeeyaan, hana u oggolaan naftaada inaad wax cunto ah. Haddii tani ay kugu adag tahay, waxaa jira fursad weyn oo aad adigu khafiifin u leh cudurka leptin. Hurdo la’aanta iyo cunitaanka cunnooyin kugu filan ayaa eed u leh sidoo kale caabbinta 'leptin iska caabbinta'.
Haddii aad cunto qaadatid oo aad isku deyeyso inaad si dhakhso leh u yareyso culeyska, tani waxay ku dhejin kartaa iska caabbinta 'leptin' si weyn. Aad ayey u tijaabinaysaa inaad si weyn u goyn karto qaadashada kaloorigaaga markaad iskudayaysid inaad yareysid miisaanka. Si kastaba ha noqotee, waqti kasta oo xannibaadda kaloriiga ee xad dhaafka ah ay dib u dhici karto, waxay ku keentaa jirkaaga inuu la qabsado isagoo ugu dambeyntii adkeyn kara kahortaga 'leptin'. Tan waxaa u sabab ah xaqiiqada ah kadib ka dib bedelid kadis ah oo kadis ah, jirkaagu wuxuu sameyaa wax walba oo awooddiisa ah si uu u sii wado dufanka keydsan. Tani waxay ku dhacdaa wax badan oo dadku si lama filaan ah markay iskudayaan inay u beddelaan cuntada Paleo ee aadka loo yaqaan.
Isku-darka walwal badan iyo hurdo kugu filan kuma xirna cortisol-kaaga iyo heerarka hoormoonkaaga. Cudurka 'cortisol' badan wuxuu keenaa walaac badan iyo hurdo yaraan, taasoo horseedaysa wareegga xun oo ku dhammaada si isku mid ah waqti kasta: caafimaad xumo. Haddii aadan qaadin ficil aad ku maareynaysid walaacaaga ama aad ugu yaraan 7 illaa sideed saacadood oo hurdo ah habeen kasta, waxaad naftaada u sameyneysaa caddaalad darro. Heerarka cortisol-ga sare waxay keenaan iska caabbinta leptin, iyo markii laga tago kontrool la'aan, waxay sababi kartaa buurnaan, caabuq, iyo qatar kordhinta cudurka wadnaha.
Haddii aad si fudud u cuneyso sonkor aad u badan si kastaba ha noqotee, markaa tani waxay ka mid noqon kartaa waxyaabaha ugu horreeya ee caabbintaada loo yaqaan 'leptin resistance'. Sonkortu waxay wax u yeeli kartaa caafimaadkaaga qaabab badan. Waxa jira waxyaabo sonkor ah oo inagu soo dhacaya oo innaga soo noqnoqda iyo soo noqnoqda. Haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba sonkortu wax weyn ayeynu ku leenahay. Haddii aad akhrineyso tan waxa ay u badan tahay inaad fahanto, oo aad leedahay waayo-aragnimo-gacan-koowaad ah, soo jiidashadaan. Sonkorta kaliya maahan macmacaanka, waa qasab; Ma jiraan wax la mid ah sida loo joojiyo ka dib “hal si uun” wax soo saarka sonkorta ..
Waxaa nala siiyaa sababo badan oo ku saabsan hamigeenna sonkorta: wareegga-raadinta maskaxda ee wareegga maskaxda, yaraanta macdanta, ku-dul-noolaashaha mindhicirka, nafaqo-xumada, qorshayaasha cunnada ee aan is-waafajin, dabeecad caado, cusbo badan, dhibaatooyin shucuureed, hurdo la'aan, walwal… iyo doorkeenna, anshax la'aan. Khasaare nagama lihin sababiyinka qabatinka sonkorta, laakiin ogaalku kuma filna in wax laga beddelo ama dabeecaddeenna. Haddii ogaanshaha ku filnaana waxaan dhamaanteen ku guuleysan karnaa bilado dahab ah iyo xiddigo dahab ah meel kasta oo nolosheena ah. Haddii ay jiraan wax, garashada ayaa kadhigaysa inay xitaa sii xumaato… sifiican ayaan u naqaannaa maxaan sidaas u wanaajin weyney? Fahamku wuxuu ku soo gabagabeynayaa waa qeyb kale oo inaga yeeleysa inaan nafteena ka xumaano.
Tallaabada xigta ee fahamka waa in la isku dayo oo xal loo helo. Waxaan gacantayada ku qabsanaa arimaheena iyo dadaalkeena si aan ugu wareejino badalkeena sonkorta-jecel una wareego. Tani maahan geeddi-socod xanuun la’aan ah, oo si fudud markaan u dareemno inaan dhul dhisno ayaa wax ina dhacaya oo annaga nalooga qaadayaa annaguna waxaan ku jirnaa himilo aan ku dhuujineyno sonkor kasta oo aan ogaan karno oo aan ku laabanno bilowga.
Markaan doorano inaan beegsanno ku tiirsanaanteena sonkorta, waxaan weeraraa sonkorta lafteeda, waxaan nadiifinaa jikada, waxaan faaruqineynaa guriga walxaha oo waxaan cadeyneynaa sonkorta cadowga. Tanina waa hagaagsan tahay… marka laga reebo inaysan shaqeyn. Markaan horumarinayno qorshe ficil sidan oo kale ah, waxaan nahay dhowr ficil oo aan horay usocno oo aan ula tacaleyno tilmaamaha qaldan. Kama hadlayno waxa run ahaantii dhacaya.
Sirta: bartilmaameedka arrinta dhabta ah, maaha saamaynta dhinac ee arrinta. Iyo damaca sonkorta ayaa ah dhinaca-waxyeellada, waxay calaamad u yihiin dhibaatada dhabta ah, iyo daweynta calaamadaha waligood suura gal kama dhigayaan inay arrinta xoojiso. Habka kaliya ee lagu horumarin karo run, dib-u-habeyn muddo dheer ah ayaa ah in wax laga qabto sababaha keena sonkortaas khatarta ah ee sonkorowga… haddii kale waxaad waqtigaaga u lumineysaa oo naftaada u bareereysaa mustaqbalka kale ee sonkorta.
Waa maxay asalka? Waa iska caabinta 'leptin iska caabinta' oo aan horay uga hadalnay. Hal dariiqo oo lagu xakameeyo jeceshaaga sonkorta iyo dib u noqoshada iska caabbinta 'leptin iska caabbinta' ayaa leh isugeynta dabiiciga ah ee loo yaqaan 'leptitox', oo ah isku-darka 22 dhammaan maaddooyinka firfircoon ee dabiiciga ah ee la macaamilaya jidhkaaga si loo beddelo caabbinta leptin-ka waana saameyn. Marka caabbinta loo yaqaan 'leptin iska caabbinta' jirkeenna ku dhacdo waxaan leenahay nidaam xumo. Burburkan ayaa soo saari doona astaamo dhibaato leh. Kaliya maaha iska caabbinta 'leptin iska caabbinta cuntada' laakiin waxaay soo saartaa damacyo! Taasi waa cuntada loo adeegsado musiibada! Kaliya maahan inaad gaajoon doontid laakiin waxaad ubaahan doontaa noocyada ugu xun cunnada suurtagalka ah…
Waxaan ku eedayn karnaa waxkasta oo qorraxda hoosteeda ah awooddeena aan u leenahay inaan joojino gaaritaanka cookie-ka soo socda… wax walba laakiin iska caabbinta leptin. Haddii aad jeceshahay inaad aragto dhaqdhaqaaq dhab ah oo aad beddesho waxaad u baahan tahay inaad bartilmaameedsato caabbinta leptin oo aad wax ka qabato "hagaajinta".
Leptitox waa sida kaliya ee lagu daaweyn karo dhibaatada sii kordheysa ee iska caabbinta leptin, iyadoo la tixgelinayo in loo soo saaray bartilmaameedka iyo wax ka qabashada. Leptitox waa isku-darka 22 geedo si fiican loo xushay, acids amino iyo fiitamiinno leh awood aad jidhkaaga uga caawiso inuu wax ka qabto sababta dhabta ah ee caabbinta caabbinta 'leptin'. Waxay badali doontaa waxkastoo aad u maleynaysay inaad ka ogaatay miisaanka oo yaraada.
Waxyaabaha loo yaqaan '22' ee ku yaal Leptitox waxay iska kaashadaan inay sameeyaan waxyaabo 3 ah: waxay ka caawiyaan jirka inuu ka baxo, xakameeyo damaca iyo kor u qaadida miisaanka oo yaraada. Qiyaasta maalinlaha ah waa kaniiniyada 2 ee la qaado hal mar maalintii, waxaana lagula talinayaa inaad qaadatid kuwa kaabashka ah ee 2 20-30 ka hor intaadan cunin. Haddii aad tahay mid ku cusub qaadashada cuntada, waxaan kugula talineynaa adiga inaad taleefoonkaaga digtoonaan u dirtid si uu kaaga caawiyo inaad talo ka siiso ka hor cuntadaada.
Haddii aad ka labalabeyso baarista badeecadan banaanka, Leptitox wuxuu adeegsanayaa lacag dhan 60 maalin lacag celin ah sidaa darteed gabi ahaanba ma jiraan wax aad lumiso haddii kabadan aysan kuu shaqeyn. Dalbo Leptitox maanta oo isku day naftaada.